Iflethi okanye indlu ekwicomplex epholileyo eselunxwemeni - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex epholileyo eselunxwemeni
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguZoe
Le flethi okanye indlu ekwicomplex ekwiimitha eziyi-200 ukusuka e-Freshwater, le flethi okanye indlu ekwicomplex inika ubomi obunqwenelekayo nobutofotofo. Le ndawo isandul 'ukwakhiwa ukuze ibe nomtsalane ngaphakathi ibe ikufutshane neebhari ezininzi, iivenkile zokutyela kunye neevenkile ze-boutique ezibangel' umdla.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex esandul 'ukwakhiwa. Indawo yakho yokungena engaphandle ngokupheleleyo kwindlu enkulu. Amashiti amhlophe amashiti kunye neti yasimahla kunye nekofu yomatshini weNespresso ukukwamkela.
Ngena kwindawo evulekileyo yokuceba ikhitshi elinekhitshi elisebenza ngokupheleleyo, i-TV (i-smart), ne-FastWiFi. Igumbi lokuhlambela elineshawa/iitawuli ezifudumeleyo.
Iveranda yabucala ejonge ichibi leentlanzi ukuze wonwabele isidlo se-alfresco.
Idume ngokuba yindawo yokuzalwa yenkcubeko yokusefa yaseOstreliya, iFreshwater igcine imvakalelo yayo eyahlukileyo yokuzonwabisa ngaselunxwemeni. Ngeentsuku zasehlotyeni ezingaqhelekanga abantu basekuhlaleni batsalelwa kwindawo entle enamaxethuka yaseFreshwater Beach, ipaki yayo entle kunye neentloko zayo, kunye nelali epholileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Zoe
Inombolo yomthetho: PID-STRA-31576